यसपाली दशैँमा नया नोट पाइएला ? - सिम्रिक खबर
यसपाली दशैँमा नया नोट पाइएला ?
काठमाडौं । हरेक वर्ष दशैंमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नया नोट वितरण गर्ने गरेको छ । दशैमा रमाइलोमा नया नोट आर्शिवादि दिएसँगै दिने धेरैको इच्छा हुन्छ । तर यसबर्ष कोरोना महामारीको कारण हरेक क्षेत्र प्रभावित बनेको अवस्थामा अहिले नया नोट वितरण होला कि नाइ ? सबैलाइ चासो छ । यस अघि पनि दशैमा नया नोट वितरण गर्न नहुने धारणा पनि नआएका होइनन् । दशैमा नोट फोहोर हुने भएको कारण राष्ट्रलाइ घाटा हुने भएको कारण यसखालको काम बन्द गर्ने कुरा आउने गरेका छन् । तर लकडाउन भएको खण्डमा नया नोट वितरण गर्न समस्या हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले भने यस बर्ष पनि नयाँ नोट वितरण गर्ने बताएको छ । तर महामारीले भने नोथट वितरणमा प्रभाव पार्न सक्ने भएको छ । यस पटक नया नोट छपाइको काम चलिरहेको कारण दशैमा नया नोट वितरणमा समस्या नहुने बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशन रेवति नेपालले बताए । तर दशैमै वितरण गर्ने विषयमा छलफल हुन बाँकी रहेको उनले बताए ।